जनजाति महासंघद्वारा ५ बुँदे मागसहित आन्दोलन सुरु – Himalaya TV
१९ फाल्गुन २०७३, बिहीबार २०:३०
काठमाडौं, १९ फाल्गुन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ५ बुँदे माग राख्दै बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
महासंघले बिहीबार विहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
महासंघले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र २००७ मा उल्लेखित आदिवासी जनजाति अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अविलम्ब संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आफ्ना माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी छ । ‘अब पनि हाम्रा माग सम्बोधन नगरिए सशक्त आन्दोलनमा जाने र जसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जुनसुकै घटनाको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने कुराको ध्यानाकर्षण गराउछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया रोक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन
महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी प्रक्रिया तत्काल रोकिदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रतिष्ठान खारेज हुँदैछ भन्ने कुरा आपूलाई थाहै नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘मैले त प्रतिष्ठान हटाउने कुरो सुनेको थिइनँ, कसले खारेज गर्न लागेको छ ? कहाँबाट खारेज हुन लाग्यो ? मलाई चाहिँ थाहा छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘प्रतिष्ठान खारेज हुन लागेको हो भने म त्यसलाई रोकिदिन्छु ।’
उनले अहिलेको संविधानप्रति आफ्नो पनि असहमति रहेको भन्दै तत्काल संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताए ।
‘मैले धेरै अप्ठयारोसँग मुकाबिला गर्दै संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छु । अहिले फेरि त्यसलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने भनेर प्रयास गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तर संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाइ पुग्नुपर्छ, पुगेन भने संशोधन हुँदैन ।’
राप्रपाले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने प्रष्ट पारेकाले अहिले नै संशोधन पारित हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । तर केही समय मेहनत गर्दा संशोधन विधेयक पारित गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
तीन प्रमुख दललाई पनि ध्यानाकार्षण पत्र
महासंघले विहीबार नै तीन प्रमुख दलको कार्यालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
महासंघले मोटरसाइकल र्‍यालीसहित कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय गएर ५ बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाएको हो । र्‍यालीमा करिब ५ सय जना सहभागी थिए । भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएको र्‍याली पहिले सानेपास्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पुगेको थियो ।
पार्टी कार्यालयमा केहीवेर सभा गरिएको थियो । सो सभामा महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइरालालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।
कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि महासंघको टोली सहर परिक्रमा गर्दै धुम्बाराहीस्थित एमाले पार्टी कार्यालय पुगेको थियो । महासंघले एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
त्यसैगरी महासंघले अन्तिममा पेरिसडाँडास्थित माओवादी केन्द्रको कार्यालय पुगेर कार्यालय सचिव प्रकाश पोखरेललाई ध्यानाकर्ष पत्र बुझाएको छ ।